Mbola mamofona kiantranoantrano ny momba ireto mpitandro ny filaminana ireto na dia nilaza aza ny minisitry ny polisy fa tsy fialokalofan’ny jiolahy ity vondrona iray ity. Mampifoha indray ny raharaha Antsakabary ny toy izao ary azo eritreretina fa hivazavaza indray ny mpiaro ny zon’olombelona iraisam-pirenena.
Efa tsy ho ela intsony ny fametrahana governora any amin’ny faritra raha araka ny fanambaran’ny praiminisitra tany Ambositra. Hatreto dia tsy hita izay tena maha samihafa ity andraikitra ity amin’ny lehiben’ny faritra. Miteraka olana hatrany ity fanovana rafitra ity satria hiova tanteraka koa izany ny rafi-bola izay entina hampihodinana azy ary torak’izany koa ny tompon’andraikitra maro any amin’ny faritra izay hotendren’ny governera vaovao.
JIOLAHY NISANDOKA HO MPANAO GAZETY
Nisandoka ho mpanao gazety an-tsoratry ny orinasa lehibe iray ilay jiolahy fantatra amin’ny anarana hoe Ragodogodona na ra-BC. Nanana karatra sandoka izy niaraka taminy ary hita izany nandritry ny fisamborana azy. Ny tranga toy izao dia manaporofo hatrany fa tsy milamina ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety matoa misy sahy misandoka. Samy nanao ny karatry ny trano tokoa mantsy ireo orinasa izay tsy nanaiky ny karatra navoakan’ny minisitera tamin’ny fitondrana teo aloha ary nanamora ny fisandohana izany.
Tapaka izany fa hiakatra 700 ariary ny saran-dalan’ny taksibe. Nanaiky izany ny ATT nandritry ny fihaonany tamin’ny mpitatitra. Misy kosa anefa ny fenitra takiana dia ny fanatsarana ny kalitaom-pitaterana sy ny fanajana ny lalàna sy ny zotra. Hatreto dia mbola ny 35% amin’ireo fiara mpitatitra eo an-drenivohitra ihany no manara-dalàna. Mila manenjana ny ATT satria ny mpanjifa hatrany no voa mafy amin’ny fepetra raisina toy izao.
Tao anatin’ny 15 taona dia tsy mba nanampy tamin’ny fanatsarana ny famokaran-drano eto an-drenivohitra mihitsy ny fanjakana nifanesy. Raha ny fanazavan’ny praiminisitra dia hisy ny famatsiam-bola manokana avy amin’ny fanjakana mba hanamboarana fantsona fitrohan-drano izay manampy amin’ny famokaran-drano. Teny Itaosy sy Ambohidrapeto no natao andrana momba izany ary ao anatin’ny roa volana dia efa tokony hisy vokatra.
Mbola mitohy ny fanisana ny mpandraharaha amin’ny fizahantany eto amintsika. Hitarina hatramin’ny 26 aprily ny fandraisana ny dosie fampahafantarana avy amin’izy ireo satria hatreto dia mbola vitsy ihany no nahatonga izany. Ny tanjona dia ny ady amin’ny mpandraharaha izay tsy manara-dalàna sy tsy mandoa hetra ho an’ny fanjakana ary koa fametrahana ny fenitra ilaina ao anatin’ny sehatry ny fizahantany.
Nahazo trano fivarotana tsy fidiny ireo mpivarotra amoron-dalana etsy Behoririka taorian'ny fandravana ilay trano tetsy Behoririka. Na tsy voarava hatramin'ny farany aza ny trano, tsy ela mihitsy ireo mpivarotra nanararaotra izany ka nametraka ny entan’izy ireo ao anatin'ilay trano ary misy mihitsy aza ny mivarotra ao. Manara-penitra e !